BARADHADA "IRBIT": SHARAXAADDA IYO SIFOOYINKA BEERISTA NOOCYO KALA DUWAN - BARADHADA
Baradhada Irbit at your aqalka
Waa maxay macdanta "Irbitsky", maxay yihiin sifooyinka, sharaxaadda iyo astaamaha noocyada kala duwan, iyo sidoo kale sawirada iyo dib u eegista - kuwani waa macluumaad faa'iido leh oo faa'iido u leh beeralayda jecel inay rabaan inay koraan khudraddan si ay u gaaraan.
Baradhada "Irbitsky" waa noocyo balanqaad ah oo lagu kobciyo beeraha khudradda. Waqtiga laga bilaabo beertu waxay u dhaxeysaa 70 illaa 90 maalmood.
Laga soo bilaabo hal hektar waxaad ka heli kartaa ilaa 390 meter oo badeecooyin leh dhadhan fiican. Kala duwanaanshahan ayaa lagu xaqiijiyay in lagu keydiyo - illaa 96% dalaggii waa la keydiyay.
Bushes sredneroslye, iswada. Ubaxyada cabbirka dhexdhexaad ah oo leh hoos udhac yar oo hooseeya ee gudaha. Caleemaha waa cagaar mugdi, size dhexdhexaad ah. Caleenta baradhada "Irbitsky" waxay leedahay miro wareegsan oo indhaha yar leh. Baradhadu waa casaan midab leh, jidhkuna waa hurdi iftiin. Mid ka mid ah baadiyaha koraa ilaa 8 digriiga. Miisaanka hal baraf ayaa gaaraya 190 g.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa ee kala duwan ayaa la arki doonaa 2009 ee Urals ee Ruushka Federaalka. Maanta waa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee machadyada cilmi-baarista.
Dalagyada rootiga ee noocyada kala duwan, guud ahaan, ma laha muuqaalada gaarka ah ee beerashada, maadaama aan la qabin, ka duwan kuwa kale.
Abuuritaanka baradho waa inay noqotaa qoraxdu, haddii ay suurtogal tahay, laga ilaaliyo qoraallada, maadaama uu khudraddan jecel yahay iftiin.
Wixii baradho sii kordhaya, carrada dabacsan waa mid ku habboon, leh bullaacad fiican iyo aeration. Kala duwanaantani ma aha mid la mid ah oo ku saabsan hannaanka carrada, inkastoo ay ka fiican tahay in la siiyo doorasho ciid ah halka cawska, beeraha jiilaalka iyo digirta la koray.
On ciidda bacaadka ah si ay u beerto baradho this istaagi ka dib lupine. Cadaadiska Soil - pH 6.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada caanka ah ee baradho sida "Gala", "Kiwi", "Rosara".
Beerta lagu beeray "Irbitsky"
Baradhada "Irbitsky", sida laga soo xigtay waayo-aragnimo ee bannaanka iyo sharaxaad, lagu beeray si la mid ah noocyo kale oo badan.
Xaaladda ugu weyn ee helitaanka goosashada hodanka ah waa wax si fiican loo diyaariyay iyo taariikhda la beero.
Doorashada saxda ah ee waqtiga beerto ee baradhada - iyo kala badh dhibaatada ayaa la xalliyaa. Wax soo saarka iyo tayada digriiga waxay ku xiran tahay xilliga beerto. Heerkulka ciidda ku haboon wuxuu caawiyaa xididada xididada oo koraan.
Waqtiga hore ee beerashada wuxuu dhalin doonaa dhalid 600%. Bannaanka beeralayda leh khibrad iyo beeralayda waxay aaminsan yihiin in waqtiga ugu fiicneyn ee lagu beero noocyada Irbitsky waa marka ciidda qoto dheer oo ah 12 cm diirto ilaa 7-8 ° C.
Waa heerkulkani oo keena in uu kordho xididada. Beereydu waxay sidoo kale suurtagal noqon kartaa heerkul ah +30 ° C, iyada oo la bixinayo alaab beerto horayba u soo baxday, mana jiri doonto heerkul hoosaadka.
Beerto hore ee dalagga xididku wuxuu suurtogal u yahay in la sameeyo nidaam xidid awood leh, taas oo ah saldhigga caafimaadka iyo horumarinta geedkaan.
Waa muhiim! Bataashyada beeraha ee bakeeriga aan kululayn wuxuu yaraynayaa dhalidda by celcelis ahaan 20%.
Baradhadu waxay diyaar u yihiin beeritaanka 3 asbuuc:
cusbooneysii digriiga, ka saar xididdada cayayaanka iyo cudurada:
dhig qalabka beerto ee meelo dhalaalaya oo diiran u biqilka;
kala soocaan xididada qiyaasta jajabyada;
kala qaybiyaan digriiga waaweyn qaybo (hal qayb - hal ilaa 3 buro);
daweeyso dalagyada xididka leh diyaarinta ilaalinta cudurada iyo diyaarinta koritaanka.
Si aad u kicin biqilka digriiga, xal gaar ah ayaa loo isticmaalaa, oo ka kooban ash alwaax, bacriminta adag ee macdanta iyo naxaas sulfate.
Qaddarka ash ma aha mid nidaamsan. Wixii 1 litir oo biyo ah, ku dar rubuc ka mid ah shaaha oo ah budada sulfate iyo bacriminta on caarada mindi. Isku qas miro fiican iyo walxo dhirta maalin kasta.
Waxaad qoyin kartaa qashinka xalkan, laakiin aan ka badnayn 2 daqiiqo. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay ka ilaalisaa dhaawaca fungal.
Si loo beero dalagga this rooti waxaa lagula talinayaa jeexjeexyada diyaarisay. Ciidda ayaa horay loo beeray. Adkee 60 cm inta u dhaxeysa dhirta, 35 cm inta u dhaxaysa safka, dalagyada dalaggu qotomiyo ciidda 8-10 cm.
Ma taqaanaa? Baradhada - Tani waa khudradda ugu horeysay ee lagu koray meel bannaan. Tan waxaa sameeyey Amerikanka 1995-kii oo ku yaala Columbia.
Noocyada daryeelka ee noocyada kala duwan
Waxaa jira meelo xagaaga oo aad u kululaan kara oo qabow leh, sidaa daraadeed waa suurtagal in la sameeyo sharciyo gaar ah oo daryeel ah oo isku midka ah qof walba.
Si kastaba ha noqotee, shaqooyinka agrotechnical qaarkood ee daryeelka ah ee noocyada Irbitsky waa inay joogaan.
Markii ugu horeysay ee uu ciidda ka soo baxo waxaa loo sameeyaa qoto dheer oo ah 10 cm, markaa xiga waa in la sameeyaa ka hor inta aan la xirin dushooda.
Kala duwanaantani waa abaarta u adkeysata, laakiin dhowr waraabood ma dhibayso. Celcelis ahaan, xilliga xagaaga waxaad u baahan tahay inaad ku qaadato wax ka badan 3 xayiraad.
Waqtiga ugu fiican ee lagu dalbado bacrimin waa dayrta, marka sariiraha la qodo. Kadibna 1 digrii. M ee aagga waxaa la keenay hal baaldi oo ah compost ama digaag, 15 g oo ah cusbo potassium iyo 30 g of superphosphate.
Bannaanka u khibrad leh waxay ku taliyaan in lagu daro ash alwaaxa ceelasha marka la beerto baradho. Ash geed - waa bakhaarka fosfooraska iyo potassium, waxyaabaha muhiimka u ah ee xididkan.
Ku darista Bacriminta nitrogen waa in la sameeyaa oo kaliya guga hore, tan iyo nitrogen ku haboon yahay cagaar, iyo waxaan u baahan nahay digriiga wanaagsan.
Waa muhiim! A carrada alkal leh si xun u saameeyaa dalagga this rooti. Natiijo ahaan, beerashada noocaan oo kale ah carrada ayaa yarayn doonta koritaanka digriiga iyo ka sii daridda dhadhanka alaabta.
Cunto noocan ah maaha mid u nugul cudurrada sida kansarka, nematode dahab ah, dabaylo goor dambe ah, curds caleen, masax. Laga soo bilaabo duullaanka cayayaanka ayaa ka caawin doona daawooyinka insecticidal. Ogaanshaha nooca baradho "Irbitsky" waa, dabeecadaha ay leedahay, iyo sidoo kale waxyaabaha asaasiga ah ee loo yaqaan "loo yaqaan", ma ka baqi kartid inaad isku daydo inaad ku beerato dalagyada xididada ee aaggaaga.